LGBTQ + vatungamiriri vekushanya vanoungana muAtlanta kune 'kusangana kwemhuri'
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » LGBTQ » LGBTQ + vatungamiriri vekushanya vanoungana muAtlanta kune 'kusangana kwemhuri'
Nhau Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • tsika nemagariro • dzidzo • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Kodzero Dzevanhu • LGBTQ • Musangano Weindasitiri Nhau • misangano • nhau • vanhu • Kuvakazve • Resorts • Kutarisirwa • Vanodanana Michato Honeymoons • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau
IGLTA Global Convention yaive svomhu yekutambira kune avo vakapinda, vakagovana zvavo nyaya dzinokurudzira dzekushingirira kwehunyanzvi, pamwe nemazano avo ehutsva, chengetedzo uye kuiswa mukati mechikamu cheLGBTQ + chekushanya.
37th IGLTA Global Convention yaive budiriro inoshamisa, iine anopfuura 400 LGBTQ + nevabatsiri vekufambisa vanomiririra nyika makumi maviri neshanu vachiuya pamwechete muAtlanta.
Paive neMutengi / Mutengesi Musika, mazuva akati wandei edzidzo, kurudziro uye netiweki, uye IGLTA Foundation fundraiser, Voyage.
Humbowo hwehutachiona hwakazara kana yakaipa COVID-19 bvunzo yaidikanwa kuti igamuchire kune ese IGLTA zviitiko zvegungano.
Iyo 37th IGLTA Global Convention yaive budiriro inoshamisa, iine anopfuura 400 LGBTQ + nevabatsiri vekufambisa vanomiririra nyika makumi maviri neshanu vachiuya pamwechete Atlanta yeMutengi / Mutengesi Musika, mazuva akati wandei edzidzo, kurudziro uye netiweki, uye IGLTA Foundation fundraiser, Voyage.
Humbowo hwehutachiona hwakazara kana isina kunaka COVID-19 bvunzo yaidikanwa kuti igamuchire kune vese IGLTA convention zviitiko mu Atlanta, uye mhedzisiro yacho yaive yekugamuchirwa kwazvo kune imwe nhanho yezvakajairwa kune vaipinda, vakagovana zvavo nyaya dzinokurudzira dzekutsungirira kwehunyanzvi, pamwe nemazano avo eushingi ekuvandudza, kuchengetedzeka uye kuiswa mukati mechikamu cheLGBTQ + chekushanya.
IGLTA Mutungamiri / CEO John Tanzella
“Tinogara tichitaura IGLTA global network inonzwa kunge mhuri, nekuti kubatana kwebhizinesi kunova kwega pamusoro pemakore, ”akadaro IGLTA Mutungamiri / CEO John Tanzella. “Asi kusangana uku kwaive kwakakosha zvechokwadi mushure memwedzi gumi nemasere takaparadzana. Iwe unogona kunzwa kuda kweLGBTQ + yekushanya mune yega yega chikamu, uye zvakapa simba musangano wega wega webhusaiti pane saiti. Tinodada nekutungamira nzira mukuvakazve indasitiri yedu. ”
Pakati pezvakawanda zvakakosha:
Mutambo wekuvhura kuGeorgia Aquarium, uko vashanyi vaishamwaridzana sewhale shark, mwaranzi uye hove dzegungwa dzakatsvedza mumashure mavo mune tangi remamirioni 6.3 (23.8 miriyoni-litita).
IGLTA Foundation Funga Tank paKing & Spalding iyo yakabatanidza vatungamiriri kubva kumativi ese eindasitiri yekushanya nemasangano eLGBTQ +; hurukuro yakanangana pamharadzano yeLBBTQ + yekushanya nehutano hwese, kusiyanisa uye zvirongwa zvekubatanidza, uye nzira yekudzoka seindasitiri yakasimba, inogamuchira. Chirevo chechikamu chiri kuuya.